OneDrive inowedzera mumwe unofficial mutengi weLinux | Linux Vakapindwa muropa
Vashandisi veGNU / Linux uye OneDrive, Microsoft's gore rekuchengetedza system, ndakave neimwe nzira inonzi oneedrive-d zvinoshanda chaizvo uye izvo Vatinoshanda navo kubva kuUbunlog vatotaura. Asi nerombo rakanaka nyika yemahara software inogara iine kushamisika kutipa, uye mune iyi kesi tinoda kuratidza imwezve mukana wekushandisa sevhisi iyi, iyo inouya kubva muruoko rwemusimudziri akazvimiririra.
Zita rake harisi kujeka, kunyangwe saiti yacho ichiti 'OneDrive, yeLinux' uye nzvimbo yayo paGitHub iri '/ onedrive' uye yekutanga inogona kukuunzira matambudziko epamutemo. Chero zvazvingaitika, iri bhinari iyo yatinogona kurodha pasi nekuishandisa kubva kumutsetse wekuraira mune chero kupi kugoverwa kweGNU / Linux, kunyangwe mugadziri wayo achiti ari kushanda pane graphical interface uye kumwe kwakanyanya kuita kwekuvandudza.
Panguva ino, kunyangwe mashandiro acho akaringana kune vazhinji vashandisi, hapana mukana wekufananidza mafaira akakura kupfuura 100MB muhukuru kana kushandisa chishandiso ichi muOneDrive yeMabhizinesi account. Zvikanganiso izvo, sekutaura kwedu, zvichabviswa munguva pfupi iri kutevera uyezve tichave tichitaura nezve chishandiso chakazara kugadzirisa kusangana nekushandisa kwakanyanya.
Nezve ayo mafaro, iyi OneDrive mutengi inoenderana neInotify, rukoko kana subsystem yeLinux kernel yakagadzirirwa kuona chero shanduko mufaira system uye kuzivisa zvinoenderana zvinoshandiswa. Hazvina basa kuti titi kuti tishandise tinofanirwa kuve neakaundi yeMicrosoft kana Outlook uye kana bhanari iri mumubvunzo yatorwa pasi tinofanirwa kuimisa tichishandisa iyo faira. '~ / gadziriso / onedrive / gadziriso', kwatinofanira kuseta dhairekitori renzvimbo (sync_dir) uye pamwe nayo iyo faira (s) uye madhairekitori atinozosiya nekuda kwekuwiriranisa (skip_file y skip_dir). Ipapo, isu tinomhanya onedrive pamwe chete ne-- resync sarudzo yekuzere kuyananisa kana kuti kuitazve simba, -vo -verbose kuratidza ruzivo, uye -mo -monitor kugara mukuchinja mamiriro ekuongorora.
Website: OneDrive yeLinux
Download OneDrive yeLinux (GitHub)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » OneDrive inowedzera mumwe unofficial mutengi weLinux